Umhlaba ka-Google; Uncedo lokubonwayo lweemaphu zeemaphu - iGeofumadas
Ikhaya/Iiphotography/Google Earth; inkxaso yokubonwa kwabadwebi bebala
IiphotographyUkufundisa i-CAD / GISGoogle umhlaba / imephuGIS asibonise
I-Google Earth, ngaphandle kokuba isixhobo sokuzonwabisa kuluntu jikelele, isiye isixhaswa ngokubonakalayo kwiprographic, kokubili ukubonisa iziphumo nokujonga ukuba umsebenzi owenziwayo uhambelana; ungathethi njengethuluzi lokufundisa nge-geography okanye kwiiklasi ze-geodesy.
Kule meko ndiza kunceda i-GIS ephindaphindiweyo ukwakha ii-quadrants kunye neGoogle Earth ukujonga iziphumo, ndisebenzisa ithuba lokuzilolonga esilwenzileyo noCristian Mejía, umvavanyi waseSucre oncediswa ngamava. Ngokomgaqo, kufuneka sichaze indawo esiza kusebenza kuyo, kwimeko yaseBolivia, iphakathi kwemimandla ye-19, 20 ne-21; kunye nobubanzi i-8 kunye ne-24 degrees, kwi-hemisphere esemazantsi. Konke oku kunokutsalwa kuGoogle Earth ngokuhlolwa okulula, utshintshe ukhetho ukuyijonga kwi-UTM ukujonga ngokucacileyo iindawo kunye neendawo zokuhlala ukujonga ukulandelana kunye nobude obude.
1. I-quadrant yezi ndawo zintathu zomdla.
Kwi-Manifold kwenziwa kunye Jonga> igridi
Emva koko sibonisa ukuba silindele i-quadrant ehamba ukusuka kubude -54 ukuya -72, azilunganga kuba zikwintshona yelizwe. Kwaye nobude esibukhethayo phakathi kuka -8 no -24, baselugxwayi kuba bengaphantsi kweikhweyitha.
Siyabonisa kwakhona ukuba sifuna ukwahlula njani; umlinganiselo opheleleyo yi-18 (3 Izixhobo zee-degrees ze-6kubude obude kunye no-16 (2 amaxesha 8 degrees) kububanzi. Sibonisa ukuba uyakholelwa kuthi tile endaweni yemigca elula. Kwaye sinemimandla emithathu, njengoko ingaphezulu kwiGoogle Earth,. Ukuyivavanya, cofa ekunene kumaleko kunye nokuthumela kwelinye ilizwe ukuya kwi-kml, okwenza ukuba imeko ebonakalayo ibonakale ukuze kwilabhoratri ye-geodey kwiminyaka engama-20 eyadlulayo kwakunzima ukuyiqonda.
2. Iimephu 1: 250,000
Umzekelo, siza kusebenza kummandla wama-20 ngendlela efanayo. Kule meko, ama-1: 250,000 amashiti anobukhulu be-1.5 x 1 degree, elingana nokwahlulahlula indawo yonke ibeyi-16 x 4 tile.
Siyabonisa ukuba ngoku sifuna kuphela igridi ephakathi kwe-60 kunye ne-66 ubude, kwaye ububanzi ukusuka kwi-8 ukuya kwi-24; oku kuthetha ukuba iidishu ze-6 ziya kwahlulwa kwii-1.5 kunye namacandelo okuhamba kwiiklasi ze-1.
Yenziwe: ukukhangela, cofa ekunene kwaye uthumele ngaphandle kwi-kml. Kwi-lat / umbono omde ungajonga ukuba imigca iyahambelana na negridi yoMhlaba kaGoogle.
Ukongeza ii-centroids, zonke iithayile zikhethiweyo, kwaye kusetyenziswa umsebenzi we-geo-processing, njengoko kubonisiwe kulo mzobo ulandelayo. Akunyanzelekanga ukuba wenze omnye umaleko, kuba Manifold ixhasa iintlobo ezahlukeneyo zento kuyo, ukuba ufuna ukuthumela komnye, akufuneki nokuba uzikhethe kuba zenziwe ngokukhetha kusebenze ukuze kuphela uthinte / unamathise.
3. Iimephu 1: 100,000
Kule meko, akukho nto iguqula ngaphezu kweendawo, idijithali ze-1.5 zahlulwe zibe ngamacandelo amathathu, yingakho zihlala 0.50 x 0.50.
4 Iimephu ze-1: 50,000
Akufuneki ukuba, umaleko olandelayo wahlulwe waba ngamacandelo e-0.25 x 0.166667, kuba sisahlulahlula saba yimatriki eyi-2 x 3, njengoko sibonile kwisiphumo sokugqibela. Imigca ibonisiwe ngasekunene, ngaphakathi kwifolda nangaphantsi kwayo ngaphakathi kwemephu, enje njengoko sichaza ngelinye ilanga.
Yaye yile ndlela eya kuba ngayo kwiGoogle Earth, sinokukwenza konke kanye kanye, kunye nendawo yonke, nangona kungenakulungeleka kuba siya kufuneka siyiguqule kwi-UTM kwaye le nto yenziwa ngamacwecwe ahlukaniswe yindawo.
Kuyinto ehlekisayo ukuba ifayile yefayile .fap equle zonke iifayile, imilinganiselo ye-85 kb neGoogle Earth 59 kb.
Apha ungayilanda ifayile kwi .fom ifomathi kwi-GIS yeMpawu kunye .kmz kwiGoogle Earth.
Ekugqibeleni, ukwenza oku ngaphandle kweGoogle Earth bekuya kufuna ixesha elininzi lokujonga okungathandabuzekiyo kunye nokuthandabuza kwempazamo enokwenzeka. Imifanekiso kaGoogle abayi kuba nechanekileyo, kodwa njengethuluzi lokufundisa lingaba luncedo kakhulu, kwinqanaba lokuba ukuchaneka kwalo kuthatha iindawo eziqhelekileyo ukuba zibe ziincinci ngaphantsi kweempahla zeeofisi.
Ngaba unayo izithuba ze-cartographer?
Ndicinga ukuba ufuna ukukwenza ntoni ngePlexEarth, yikhangele, ngokuqinisekileyo ikuxazulula kwaye iqhube kwi-AutoCAD
Ndingathanda ukuba Ukungenisa umfanekiso ukusuka Google Earth ukuya AutoCAD njengoko AutoCAD ndinazo iikhonto yomhlaba kodwa unqwenela ukuba kukucacisa umfanekiso G. zomhlaba kodwa noc ukuba mna ukufumana kangakanani na igridi umfanekiso kwisikali oko xa Unokumnceda njani mna
Inguqu yakutshanje yeGoogle Earth ukulahlekelwa kwesi sixhobo:
Olunye ukhetho luvela kuGoogle Earth, yiya ku "uncedo, khangela uhlaziyo" ukhetho, olujonga ukuba kukho inguqulelo entsha xa kuthelekiswa naleyo osele unayo kwaye ukhuphele entsha ukuba uthatha isigqibo.
Ndicinga ukuba i-Manifold yenza loo nto, i-ArcGIS kufuneka ikwazi ukuyenza. Nangona ndingazange ndiyenze nge-software ye-ESRI.
i-agent g!, sele ndifake inguqulo ye-google eart 6.5, yiliphi iphepha elingazikhuphela ukuhlaziywa?
Kwakhona kuyimfuneko ukuba usebenzise ngokuphindaphindiweyo ukuthumela umgca ngamnye okanye umfanekiso kwaye uyisebenzise, ​​unokusebenza kwezinye iifayile ezifana neArggis?
Ukungalungi, andicinga ukuba kukho ikhosi apho.
Uya kufuneka uhambe kwisilingo kunye nephutha.
Ndiyabonga ngokugqibeleleyo, ngaba unokuncoma isifundo sokwenza oku yi gridi kumamitha ayi-square
Kuqiniseke Kule nto kufuneka ube nomzobo kunye ne-UTM ukubonakaliswa, kwaye iphaneli yegridi iya kubonakala kwindlela yokwenza igridi kwimitha.
Ulungile yam iphambeko endenzayo engalunganga ngokubulela kakhulu.
Kukho indlela ongayenza ngayo kwiimilinganiselo ezichanekileyo, oko kukuthi i-100 metres square, umzekelo umgca okanye igreyati yeemitha ezi-square ze-100.
Ndilayishe iifayile zeesampuli, ngoko ziyakunikwa.
Eqinisile, udala umzobo omtsha uze uyisebenzise ngokuchofoza kabini kuyo.
Emva koko uqhubela kwigridi.
Zama ukubona umehluko usebenzisa:
Jonga / igridi
kwaye emva koko
Jonga / i-graticle
Omnye wezo zibini kufuneka akusebenzele kakuhle.
Sawubona, oku kuhle kakhulu, kodwa kwimeko yam ayiphume ngokuchanekileyo, mhlawumbi kungenxa yokuba uluhlu apho luthi INKULUNKULU emva kokunyanzela igridi ayiphumeli; kuphuma ngokungafihla ukubeka kwaye akuyiyo inketho UKUBA ikwazi ukuyenza? Ndiyabonga
Ndiyabulela kakhulu ngokuphendula kwakho ngokukhawuleza, omnye umbuzo ngaphambi kokuba wenze igridi kufuneka kudibanise iDraw kwaye isebenze kuyo? okanye kukho enye indlela.
KuMhlaba kaGoogle udlula isalathisi semouse phezu kwekhusi kunye nobude kunye nobude buboniswe ngezantsi. Ukuba awuyiboni, kukuba iyenziwa ukuba isebenze, ivulwe ngokwenza "ibar yokujonga / imeko"
Okulungileyo njengoko ubude kunye nobubanzi emhlabeni, kulo mzekelo ndifumana ezinye ixabiso kungekhona ukuba ndisebenzisa iGoogle Earth kakuhle.
Ndiyabulela kwaye uyaxolisa ukuba umbuzo ungumlinganiselo oqhelekileyo wokufumana i-cominzo nale nto
Ithengwa, i-Personal version iya kwi $ 245.
Into endiyifunayo yinto enhle kodwa ndandiyilanda phi okanye ndafumana i-GIS Manifold?
mbuliso! Ndiyabonga kakhulu ngoncedo, ngoku ndiyakwazi ukufumana imephu ye-Google Earth ukususela kwangoko, enemibuzo emininzi.